တရုတ်နိုင်ငံက ကွမ်တုန်း-မကာအို နက်ရှိုင်းစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဇုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းထုတ်ပြန် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက ကွမ်တုန်း-မကာအို နက်ရှိုင်းစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဇုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းထုတ်ပြန်
ကွမ်ကျိုး၊ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ဗဟိုအာဏာပိုင်များ က ဟယ်ချင်းကျွန်းတွင် ကွမ်တုန်း-မကာအို နက်ရှိုင်းစွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဇုံတစ်ခု အကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်ရေး အထွေထွေစီမံကိန်းတစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီမှ ပူးတွဲထုတ်ပြန်သည့် ယင်းအစီအစဉ်ကို ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အများပြည်သူသို့ချပြခဲ့သည်။
ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ယခုတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းသည် “တစ်နိုင်ငံ စနစ်နှစ်မျိုး” မူဝါဒကို ကျင့်သုံးရာတွင် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုဖော်ဆောင်မည့် အဓိက ကျသော စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သလို မကာအိုအထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ အား ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် အရေးပါသော တွန်းအားတစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။
ဆန်းကျန့်ဒေသ တရုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအင်စတီကျုရှိ Free Trade Innovation Center ၏ Director ဖြစ်သူ
Yu Zong Liang က “ ဒီအစီအစဉ်က မကာအို ဒေသအတွက် အမြင်အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအမိမြေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလုံးစုံကိုပေါင်းစပ်ဖော်ဆောင်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီအစီအစဉ်ဟာ တစ်နိုင်ငံစနစ်နှစ်မျိုး အတွက် အနာဂါတ်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ လမ်းကြောင်းအသစ်တွေ ကို ရှာဖွေပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်” ဟုဆိုသည်။
ဟယ်ချင်းကျွန်းသည် ကွမ်တုန်းပြည်နယ်၊ ကျူးဟိုင်မြို့၏ တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး မကာအို အထူးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တည်ရှိသည်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဇုံ၏ စုစုပေါင်း ဧရိယာမှာ ၁၀၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ ခန့် ရှိကြောင်း အစီအစဉ်ထဲတွင်ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အစီအစဉ်ကို ထိုဒေသ၏ မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာတွင်ဖော်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် မကာအိုဒေသ၌ သင့်တော်သောစီးပွားရေးမတူကွဲပြားမှု ပလက်ဖောင်းသစ်တစ်ခုကို အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်မည့်အပြင် မကာအိုဒေသခံများ၏ ဘဝနှင့်အလုပ်အကိုင်များအား ပိုမို အဆင်ပြေစေမည့် နေရာသစ်တစ်ခုကိုဖော်ဆောင် ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တစ်နိုင်ငံ စနစ်နှစ်မျိုးမူဝါဒကျင့်သုံးမှုတွင် ကြွယ်ဝစေသည့်ပုံစံသစ်တစ်ခုဖြစ်လာစေမည် ဖြစ်ပြီး ကွမ်တုန်း-ဟောင်ကောင်-မကာအို Greater Bay ဒေသတွင် မြင့်မားသည့် အုပ်မြစ်ချမှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာမည်ဟုသိရသည်။
အစီအစဉ်အရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဒေသ၌ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး မကာအိုဒေသ၏ မတူညီသည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရာတွင် အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။ ထိုဒေသတွင် မကာအိုဒေသခံများ နေထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အိမ်ယာအသစ်ဖြစ်လာမည်ဟု အစီအစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအစီအစဉ်သည် မကာအိုဒေသကို အဆင့်မြင့် အခွင့်အလမ်းများပွင့်လမ်းစေမည့် စနစ်သစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုစေမည်ဟုသိရသည်။ (Xinhua)
GUANGZHOU, Sept.7(Xinhua) –China’s central authorities have issuedageneral plan for buildingaGuangdong-Macao in-depth cooperation zone in Hengqin.
It said building the zone isamajor arrangement to enrich the practice of “one country, two systems,” and will be an important driving force for Macao’s long-term development.
Hengqin is located in the southern part of Zhuhai City in Guangdong Province, just across from the Macao Special Administrative Region.
According to the plan, the cooperation zone will develop new industries to help promote Macao’s economic diversification. It will beanew home for Macao residents to live and work, said the plan. The plan also stressed building an integrated new system with Macao featuring high-level opening-up.
ဆီးရီးယားတွင် အမေရိကန်တပ်များ တရားမဝင်ရောက်ရှိနေကြောင်း ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားများပြောကြား
မလေးရှားနိုင်ငံက တရုတ်နည်းပညာဖြင့် တစ်ကြိမ်သာထိုးရန်လိုအပ်သည့်COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်